Indlela yokwenza imizobo kwi-Procreate step by step? | Abadali be-Intanethi
Ukuba into oyifunayo kukuthatha inyathelo eliya phambili kwaye ungene kwihlabathi lomzobo wedijithali, isicelo I-Procreate sesona sixhobo silungileyo sokuqalisa.
Yalisa, yiyo eyona app ikhutshelweyo kwiVenkile yeApp, kunye nenye yezona zirethiweyo xa kufikwa kuyilo kunye nemifanekiso yedijithali. Inemisebenzi eyahlukeneyo, eya kukwenza ukuba usebenzise izakhono zakho zobugcisa, nokuba ungumntu oqalayo okanye oyingcali kwihlabathi lobugcisa.
Kule post, siza kukuxelela indlela yokwenza imizobo ekuzaleni inyathelo ngenyathelo, ngendlela elula kwaye ekunika iingcebiso ukuba umtsha kweli candelo.
2 Uzoba njani kwiProcreate
2.1 Uyenza njani i-canvas entsha
2.2 Uyitshintsha njani ibrashi okanye irabha
2.3 Uyenza njani umaleko omtsha
2.4 umzobo wokuqala
2.5 uphuhliso lwembono
2.6 ukuqala ukufaka umbala
2.7 Ukuchukumisa okokugqibela, yongeza izithunzi
Kuya kufuneka uqale ngeyona nto ilula, kwaye oko kukwazi ukuba yintoni iProcreate kwaye yintoni esemva kwesi sicelo.
I-Procreate yinkqubo yobugcisa bedijithali, yenziwe yiSavage Interactive ngo-2011.
Oko ikhutshiwe, iguqule imakethi yedijithali yomfanekiso wedijithali, kwaye ibe sisicelo sokubhekisela kuluntu olunomdla kubugcisa bedijithali. Kwaye oku, kuzuze umbulelo kumandla ayo, ukusebenziseka kwayo ngokulula kunye nokuguquguquka kwayo. I-interface ilula kakhulu, ngoko emva kophando oluncinci kuyo, kuya kuba lula kakhulu ukuyisebenzisa.
Yiyo usetyenziso lufumaneka kuphela kwi-iPad okanye i-iPad Pro, onokuthi wenze ngayo imizekeliso ukusuka kokulula ukuya kweenkcukacha kakhulu.
Uzoba njani kwiProcreate
Kule posi siza kubona Indlela yokwenza imizobo kwi-Procreate step by step ngendlela elula kwaye ulandele la manyathelo alandelayo:
Uyenza njani i-canvas entsha
Uyitshintsha njani ibrashi okanye irabha
Uyenza njani umaleko omtsha
ukuqala ukufaka umbala
Ukuchukumisa okokugqibela, yongeza izithunzi
CUkudala iseyile entsha linyathelo lokuqala ekufuneka silazi ukuqalisa kwi-Procreate.
Linyathelo elilula kakhulu, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuvula usetyenziso kwi-iPad yethu, khetha ifayile + kwindawo ephezulu ngasekunene kwesikrini sethu, kwaye emva koko kuya kuvela ifestile apho kufuneka khetha ubungakanani beseyile esifuna ukusebenza ngayo.
Ukuba ngethamsanqa sifuna a iseyile yesiko, yobungakanani ukuba isicelo esingasinikiyo, sinokwenza ezethu.
Siya kwigalari ye-Procreate canvas, kwaye sicofa i- + icon ekunene kwesikrini sethu. Emva kokuchukumisa le icon, iwindow ephumayo iya kuvela apho siya kukhetha ukhetho lokwenza ubungakanani becanvas, kwaye siya kunika amaxabiso esiwafunayo.
Enye yezona ngongoma zibalulekileyo ezisisiseko zilandelayo, sinokuyitshintsha njani ibrashi okanye irabha. Kulula kakhulu ukwenza kwaye kukho kwakhona ezahlukeneyo ezibanzi ukukhetha kuzo.
Nje ukuba sineseyile yethu, sijonga ithebhu yebrashi esekunene phezulu. Imenyu iyavula kwaye sikhetha ukhetho lwebrashi olusifanela kakhulu ngomsebenzi.
Yenza njengezinye iinkqubo zoyilo, isebenza ngenkqubo yomaleko. Ezi zingqimba zinceda ukulungelelanisa umsebenzi, kwaye ngokwahlulahlula, kulula ukwenza utshintsho, ukudibanisa okanye ukuphelisa ngokuthe ngqo.
Ukwenza iileya ezahlukeneyo, kufuneka sizibeke kwiseyile, cofa kwifayile yomaleko ebekwe kwindawo ephezulu ngasekunene kwesikrini, kwaye ukhethe i + kwaye Procreate iya kudala umgangatho omtsha.
Into yokuqala ekufuneka sibe nayo yenye ye ingcamango yokuba sifuna ukunika ubomi kwi-Procreate.
Sizibeka phambi kweseyile yethu engenanto, kwaye sichukumisa i-icon yesitshixo phezulu ngasekhohlo, sikhetha ukhetho lweseyile, kwaye ngezantsi sivumela ukhetho lwe. izikhokelo zokuzoba.
Siza kuqala ukwenza umzobo, kwaye ngenxa yoko sikhetha umbala we-grayish hue, kungakhathaliseki ukuba ukhetha umbala onjani, sichukumisa i-icon yeebrashi kwaye sikhetha ibrashi yokuzoba kunye nepensile 6B, kwaye siqala ngokukhawuleza ukuzoba ingcamango yethu.
Sakuba sinomzobo womzekeliso wethu, siya kuhamba ukubamba kwakhona, ukuphonononga, ukucacisa iifom.
Njengoko sele sitshilo, xa sele sinomfanekiso wethu oqingqiweyo, okulandelayo kukulandelayo chaza iifom, izinto eziyilayo. Hamba unike iinkcukacha.
Siza kufumana ezi nkcukacha ngokudlala ngeebhrashi ezahlukeneyo esizifumana kwiProcreate, okanye ezo sizikhuphileyo, kuba sinokudlala ngazo. imiqulu kunye nokwakheka.
Xa sele siwuchazile umzobo wethu, inyathelo elilandelayo ekufuneka sililandele kukufaka imibala, kwaye ayifani nakwezinye iinkqubo zoyilo apho kufuneka ukhethe amalungu kwaye uwafake umbala, kwi-Procreate walatha kumbala owufunayo kwindawo ephezulu ekunene yecanvas, kwaye uyitsale kuyilo kwaye xa ukhulula Ipensile yeApple okanye umnwe owurhuqe ngawo, indawo ephawulweyo iya kuzaliswa ngombala.
Kubaluleke kakhulu ukuba indawo eza kufakwa umbala ivalwe kakuhle, Ngaphandle koko, kuya kwenzeka ntoni ukuba umbala uya kuhlala kwi-canvas yonke.
Yenza ngokwakho imaski yokuqhawula, Ikuvumela ukuba upende ngaphandle kokuhamba ngaphaya kwemida, oko kukuthi, unokunqumla umaleko kwelinye kodwa yintoni onokuyipeyinta kwinqanaba elingezantsi kwaye kungekhona kwenye.
Ukwenza imaski yokusika, okokuqala kufuneka wenze umaleko omtsha, imenyu iya kuboniswa, siya kuchukumisa ukhetho lwemaski yokusika kwaye unayo. Utolo luzakuvela kulo maleko ukhomba umaleko ongezantsi. Nje ukuba uqalise ukuzoba, uya kubona kuphela into engaphakathi kumaleko asezantsi.
Sakuba siwugqibile umzekeliso wethu, umbala, kunye neenkcukacha esiwunikileyo, lixesha lokuba siwunike. ukugqiba ukubamba.
Ukuze singashiywa nomzekeliso osicaba wento sikhangela umthamo, kufuneka sidlale ngeebrashi kunye nemibala. Ukuba sinokhetho lwebrashi yomthunzi ogqibeleleyo, ngaphandle koko, ngendlela elula kakhulu siya kuchaza indlela yokwenza isithunzi.
Okokuqala kufuneka siyazi indawo apho sifuna ukubeka khona eso sithunzi, sikhetha ibrashi nombala ofana nalowo usetyenziswe kulo mzekeliso, kukho iinketho ezimbini: mhlawumbi sithatha ithoni ethambileyo kakhulu kufuphi ne-pastel, okanye sinciphisa i-opacity yombala kunye nombala wendawo ekhethiweyo de sidale isithunzi esifanelekileyo.
Procreate lusetyenziso nge izixhobo ezininzi kunye neenketho ukukunceda xa uzobe. Njengoko sele sisazi, inoluhlu olubanzi lweebrashi, kodwa kuhlala kukho ithuba lokukhuphela iintlobo ezininzi zeebhrashi kwiiphothali zewebhu okanye ukungenisa ezo zivela kwi-Adobe Photoshop ukuba uqhele ukusebenza nazo.
Siyathemba ukuba la manyathelo asisiseko akusebenzele kakuhle xa uzobe kwi-Procreate inyathelo ngenyathelo kwaye ngoko unako qala ukuyeka ukucinga kwakho xa uzobe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Indlela yokwenza imizobo kwi-Procreate step by step?
Iibhrashi ezi-7 eziBalaseleyo zokuzala